Ahoana ny fitazonana ireo lahatahiry ambony eo amin'ny macOS Finder rehefa mandahatra ny anarany | Avy amin'ny mac aho
Ahoana ny fitazonana ireo lahatahiry ambony ao amin'ny macOS Finder rehefa mandahatra ny anarany
Ny Finder no mpitantana ny rakitra anay. Mihazakazaka foana izy io ary ampiasainay mihoatra ny indray mandeha mandritra ny andro. Na izany aza, tsara kokoa ny manana filaharana tsara ao anatiny hahitana izay rehetra tadiavintsika. Ary ny fampirimana eo anelanelan'ny fisie dia tsy hevitra mety. Andao hianatra ny hanana azy ireo hatrany an-tampony foana rehefa manafatra ny anarany isika.
El Mac Finder dia namana taloha avy amintsika rehetra. Efa tao amin'ny rafitra fiasa efa an-taonany izy ary izy no voalohany mandray anao rehefa manomboka ny Mac anao voalohany. Ao no hahitanao mpitantana rakitra, tsy ny kapila mafy ao anaty Mac ihany, fa ny singa ivelany rehetra ampifandraisinao amin'ny solosaina. Ho hitanao ao ireo antontan-taratasy, sary, horonan-tsary, lahatahiry sns. Ary ity no farany Tianay ny hanana izany eo an-tampon'ny zava-drehetra hahazoana azy ireo haingana araka izay tratra. Azavainay ny fomba fanaovana azy.
Ny zavatra voalohany tianay holazaina aminao amin'ity dia holazainay aminao fa ny lahatahiry ny toerana samihafa dia hohafarana ary ho hita eo an-tampon'ny Finder isaky ny manafatra anarana ianao; raha ataonao amin'ny daty, habe sns. tsy handeha io. Izany dia nilaza fa tena tsotra ny dingana. Imbetsaka isika no mila manadihady zavatra bebe kokoa amin'ireo safidy omen'ny macOS antsika. Ary ny iray amin'izy ireo dia ity: tazomy eo amboniny ny lahatahiry rehefa mandahatra ny anarany isika.
Aiza no ahitako an'io safidy io? Mora: tsindrio ny "Finder" ao amin'ny macOS Dock ary eo amin'ny baran'ny menio, kitiho indray ny "Finder". Anisan'ireo safidy miseho, manomeza kitika totozy amin'ny «Preferensi». Ary amin'ny takelaka farany, ilay miantso ny tenany hoe «Advanced» dia ho hitanao fa ny safidy farany azonao asiana marika dia "Ataovy hatrany amin'ny solosaina ny lahatahiry". Vonona, rehefa voamarika indray mandeha, dia azonao atao ny manandrana azy ao anaty lahatahiry tianao. Manomboka izao dia hiseho ireo raha vantany vao manokatra faritra iray amin'ny Finder anao ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Ahoana ny fitazonana ireo lahatahiry ambony ao amin'ny macOS Finder rehefa mandahatra ny anarany
Ny pre-order HomePod voalohany dia mihoatra ny fifaninanana rehetra afa-tsy ny Amazon Echo
Hanatrika ny Fivoriana ho an'ny fampandrosoana any Shina i Tim Cook ho filoha mpiara-mitantana